सिफारिश गरिएको स्प्यानिश अपराध उपन्यासहरू, सबै भन्दा व्यापक रूपमा पढिएको र प्रशंसा गरिएको वर्तमान साहित्य
सिफारिश गरिएको स्प्यानिश अपराध उपन्यासहरू
डोलोरेस रेन्डोन्डो द्वारा वाक्यांश।
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता "सिफारिश स्पेनिश अपराध उपन्यास" को लागी खोजी गर्छ, नतीजा ईवा गार्सिया सेन्ज दे उर्तुरी वा डोलोरेस रेडोंडो जस्ता लेखकहरुलाई जनाउँछ। तिनीहरूसँगै, त्यहाँ नामहरू छन् जुन शैलीमा टोन सेट गर्दै छन्, जस्तै एन्टोनियो मेसरो र कारमेन मोला, अन्यहरू।
ती सबैले व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण शीर्षकहरू सिर्जना गरेका छन्। मुख्य संपादकीय संख्या बाहेक, उनका धेरै जासूस कथाहरू सफलतापूर्वक फिल्मको लागि अनुकूलित भएका छन्। र टेलिभिजनमा। तसर्थ, स्पेनको समकालीन संस्कृतिमा उनीहरूले छोड्ने मार्क देख्न सुरु भइरहेको छ।
1 सिफारिश गरिएको स्प्यानिश अपराध उपन्यासहरू
1.1 Bazt Trn त्रयी, डोलोरेस रेन्डोन्डो द्वारा
1.1.1 अदृश्य अभिभावक (२०१ 2013)
1.1.2 हड्डीमा लिगेसी (२०१))
1.1.3 तूफानलाई प्रस्तुत गर्दै (२०१))
1.2 ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्टुरी द्वारा, श्वान शहरको साइलेन्स (२०१ 2016)
1.2.1 पानीका संस्कार (२०१ 2017)
1.2.2 समय लॉर्ड्स (२०१ ()
1.3 एन्टोनियो मर्सेरो द्वारा मरेका जापानी महिला (२०१)) को मामला
1.4 जिप्सी दुलही (२०१)), कार्मेन मोला द्वारा
Baztán त्रयीडोलोरेस रेन्डोन्डो द्वारा
बास्क लेखक डोलोरेस रेन्डोन्डो मीराको उत्कृष्ट कृति उनको मूल क्षेत्रको छायादार इन्क्लेभमा सेट गरिएको तीन पुस्तकहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ, बत्तान उपत्यकाका मिथक र दन्त्यकथाको सन्दर्भहरू प्रासंगिक छन्। इतिहासमा जाँदा, सम्भाव्यता र केही घटनाहरूको शानदार बीचको छुट्टिने कुरा स्पष्ट देखिँदैन।
रेडोंडोले पाठकमा यो "भ्रम" उत्पन्न गर्दछ अत्यधिक नशेको षड्यन्त्र र पुलिस अनुसन्धानको असाधारण सही वर्णनको माध्यमबाट। यी धेरै यथार्थवादी तरिकामा प्रस्तुत हुन्छन् अपराधहरू इन्जिक्यामिक इन्स्पेक्टर अमैया सालाजारले सुल्झाउनु पर्छ, नायक।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: अदृश्य अभिभावक
सालाजारले कारबाही गर्दछ जब अधिकारीहरूलाई एक किशोरको निर्जीव शरीरको खोजीको बारेमा सूचित गरियो बाज्टन नदीको किनार। त्यो हत्या अर्कोसँग सम्बन्धित देखिन्छ जुन एक महिना अघि उही क्षेत्र र त्यस्तै परिस्थितिमा भएको थियो (ना naked्गो शरीरहरू अनौंठो स्थितिमा छोडियो)।
केस समाधान गर्न, सालाजारले आफ्नो समस्याग्रस्त विगतको सम्झनाहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्दछ र अपरिमित घटना देखिन्छ। ती मध्ये एक बाजाजुन हुन्, ती पौराणिक व्यक्तिले बालिकाको मृत्युमा संकेत गरेको छ। यस कारणका लागि, उसले अन्ततः आफ्ना बहिनीहरू फ्लोरा र रोज, प्लस आन्टी इन्ग्रासी (अलौकिक मामिलामा विशेषज्ञहरू) को सहयोग चाहिन्छ।
हड्डीमा लिगेसी (2013)
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: हड्डीमा लिगेसी
को दोस्रो किस्त Baztán त्रयी भित्र उठेका धेरै शंकाको पुष्टि गर्दछ अदृश्य अभिभावक। पहिलो, नयाँ संकेतहरू बुबाको अनैतिक व्यवहारको बारेमा देखा पर्दछ (सम्झनाहरूमा) निरीक्षकको। अमैयाको वरपर पनि अलौकिक उर्जाको स्पष्ट आगमन भएको छ, जो भर्खर नयाँ आमा बन्नुभयो।
तर तपाईको बच्चाको कोमलतामा डुब्न समय छैन। सालाजारले एक नयाँ मुद्दा सुल्झाउनु पर्छ जुन अपराधीको क्रूरताले चित्रित गर्‍यो जसले टार्टोलो, एक प्रकारको उच्छृंखल, रक्तपातपूर्ण र निर्दयी साइक्लप्सको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। नियमित मा, अवस्था विगतको घाउ र वर्तमानका खतरनाक रहस्यहरु बीचको झन् झन् दमनकारी बन्छ।
आँधीबेहरीको लागि प्रस्ताव गर्दै (2014)
आँधीबेहरीको लागि प्रस्ताव गर्दै।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: आँधीबेहरीको लागि प्रस्ताव गर्दै
त्रयीको तेस्रो भागमा, यसमा समावेश भएको इन्टिग्मा ईन्गुमा हो, जो एक शैतान हो जसले आफ्नो सासका साथ मानव बच्चाहरूको जीवनलाई चुस्दछ। यद्यपि - पूर्ववर्ती खण्डहरूमा जस्तै - मृत्युको अपराधी मासु र रगतको मान्छे हो।
विशाल साहित्यकार आलोचक र पाठकहरूको बहुमतको लागि, आँधीबेहरीको लागि प्रस्ताव गर्दै यो त्रयीको लागि अन्तिम स्पर्श हो। कारण अत्यधिक हो: कथाको स्थायी तनाव चरित्रहरूको सर्कलको पूर्ण बन्द गरेर थपिएको छ। यस बिन्दुमा, डोलोरेस रेडोंडोले सागाका प्रत्येक सदस्यलाई अत्यन्त उल्लेखनीय गहिराइ र मानवता प्रदान गर्‍यो.
सेतो शहर को मौनता (२०१ 2016), ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्टुरी द्वारा
सेतो शहर को मौनता।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: सेतो शहर को मौनता
सेतो शहर अमर सैन्ज दे उर्टुरीको ट्रिलोजीको पहिलो किस्त समकालीन स्प्यानिश अपराध उपन्यासको विधा भित्र। व्यर्थमा होइन, सेतो शहर को मौनता डेनियल कालपर्सोरोको निर्देशनमा २०१ 2019 मा ठूलो स्क्रीनमा ल्याइएको थियो। सम्पूर्ण श्रृंखलाको नायक अथक निरीक्षक उनाई लोपेज आयला (उर्फ "क्राकेन", आफ्नो प्रभावशाली उपस्थितिको कारण) हो।
सेफलोपोडको उपनामको साथ अनुसन्धानकर्तासँगै, उनका विश्वासी सहायक एस्टालिज र कमिश्नर अल्बा भिट्टोरियामा भएको गडबडीपूर्ण अपराधहरूको समाधान र पूर्वानुमान गर्न समयको बिरूद्ध दौड दौडन्छन्। यो कारणले, लुपेज - अपराधीहरुलाई क्राइमिंग गर्ने विशेषज्ञ - आफ्नो मिशन प्राप्त गर्न अपरंपरागत (र नैतिक रूपमा बहस गर्ने) विधाहरूको सहारा लिन हिचकिचाउँदैन।.
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
मा त्रयीको दोस्रो पुस्तक, अपराधीले एक अनौंठो पुर्खा अनुष्ठानको पाइला पछ्याउँदछ जुन गर्भवती महिलाहरूलाई पनि समावेश गर्दछ। त्यसो भए, पहिलो गर्भवती पीडित देखा पर्दा लोपेजले व्यक्तिगत तवरमा केस लिन्छ, जो उसकी पहिलो प्रेमिका थिई। त्यस्तै कमिश्नर अल्बा पनि सर्तमा छन् (उनै बुबा हुनसक्छिन्), त्यसैले उनी हत्याराको तारो हुन सक्छिन्।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: समय प्रभुहरु
यस अवसरमा, अन्वेषकहरूले दुई फरक समयमा प्रमाण खोज्नुपर्नेछ। एकातिर, मध्ययुगीन उपन्यासमा प्रस्तुत मृत्युको संकेतहरू वर्तमानका हत्याराहरूसँग एक प्रकारको सम्बन्ध रहेको छ। अर्कोतर्फ, अल्बा र उनाईले उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको सम्बन्ध र परिवारको भविष्यका बारे प्रश्नहरू समाधान गर्नुपर्नेछ।
मृत जापानी महिलाहरु को मामला (२०१ 2018), एन्टोनियो मर्सेरो द्वारा
मृत जापानी महिलाहरु को मामला।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: मृत जापानी महिलाहरु को मामला
जापानी को मामला Muertas सोफिया लुना श्रृंखला मा दोस्रो किस्त हो। यस पुस्तकले मुख्य चरित्रको आन्तरिक, सामाजिक र पारिवारिक द्वन्द्वलाई बुझाउँदछ मानिसको अन्त्य, पूर्ववर्ती भोल्यूम। स्पष्टतया, नायक - कार्लोसको सेक्स पुन: नियुक्ति शल्यक्रिया निश्चय नै सोफाइमा परिणत भएको छ यो जासुसी विधामा अभूतपूर्व परिस्थिति हो।
उल्लेख गरिएको नाटकीय विचित्रता बाहेक, यस पुस्तकको प्लटले द्रुत रूपमा पाठकलाई हूक गर्छ र प्रतिबिम्बित गर्दछ। कारण: हत्याराले जापानी पर्यटकहरूको एउटा समूहलाई hypersexuality लाई घृणाको साथ आक्रमण गर्दछ। यस कारणले गर्दा, लुना शicious्कास्पद अनुवादकमा भर पर्नुपर्दछ जब जापानी राजदूतको छोरी हराएको कारण सार्वजनिक अपेक्षाहरू बढ्छन्।
जिप्सी दुलही (२०१ 2019), कार्मेन मोला द्वारा
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: जिप्सी दुलही
इन्स्पेक्टर एलेना ब्लान्कोले सुशाना मकायाको केसको जिम्मा लिइन्, जो उनको स्नातक पार्टीको उत्सव मनाएको दुई दिन पछि मृत अवस्थामा फेला पर्‍यो। ओटिसाका जिप्सी अभिभावकहरू थिए, यद्यपि उनी आधुनिक समाजमा हुर्केका थिए। त्यस्तै मृत्युलाई सात बर्ष अघि भएको (बहिनी लारा मकायाको) सँग सम्बन्ध भएको देखिन्छ किनकि दुबैमा समान मकाब्रे संस्कार पाइएको थियो।
जे होस् लाराको हत्यारा भेटियो र कैदमा परेको थियो, तर सुसानाको मृत्युले सम्पूर्ण पुलिस टोलीमा श doubt्का गर्‍यो। के निन्दा गरिएको मानिस वास्तवमा निर्दोष छ ... वा कोही उसको मोडस अपरेन्डी दोहोर्याउँदैछ? समानान्तर रूपमा, ब्लांकाले केही जिप्सीहरूको जीवनको विकृत दृष्टिकोण बुझ्ने कोशिस गरे जसले आफ्नो रीतिथिति त्यागे। थप रूपमा, उनीसँग लामो समयदेखि समाधान नगरिएको केस छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » सिफारिश गरिएको स्प्यानिश अपराध उपन्यासहरू
मनुएल माचडो। उनको मृत्युको वार्षिकी। कविताहरु